Ndị ọchụnta ego Grasshopper Uganda Ugbu a ndị na-eme ihe ike COP26 agaghị anọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa na Uganda » Ndị ọchụnta ego Grasshopper Uganda Ugbu a ndị na-eme ihe ike COP26 agaghị anọ
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • culinary • omenala • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Ịrụ ọrụ • Sustainability News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa na Uganda
Ahịhịa na Uganda
Dị ka UN UN Climate Change Conference on amachi carbon carbon to 1.5 degrees, nke a maara dị ka COP26, mere na Glasgow site na Nọvemba 1-12, 2021, na-amaghị ndị isi ụwa nọ, obere obodo ama ama na mpụga Greater Masaka City, nke dị kilomita 130 na ndịda ọdịda anyanwụ. nke isi obodo Uganda, Kampala, otu obodo ndị Uganda nọ na-ebi ndụ site n'iweta ụkpara ogologo oge alaeze Buganda dị adị kemgbe narị afọ nke 13, gụnyere ebe agbụrụ ụkpara nke a na-akpọ "nsenene" bụ otu n'ime ezinụlọ 52 dị na Buganda. .
Na Bukakata nke dị na mpụga Masaka ka ukwuu nke dị n'ikpere mmiri nke ọdọ mmiri Victoria, ndị obodo na-egbu egbu site na iwe ihe ubi a na-ewu ewu n'etiti ọnwa Mee na Nọvemba mmiri ozuzo.
Nke a bụ mgbe mmiri ozuzo na-amanye ụkpara ha n'igwe ha.
Ọ dị nnọọ iche na “ekeresimesi ọcha” nke dị n'Ebe Ọdịda Anyanwụ, bụ́ nke e ji mara snow iji kpọsaa oge.
Na Uganda, ọ bụ ụkpara na-esi na mbara igwe “snoo” n'ụzọ nkịtị, na-adọta ọtụtụ obodo site n'aka ndị toro eto gaa n'ụmụaka na-anụ ọkụ n'obi na-eji egwuregwu na-ewe ihe ubi ndị a. Ọ bụrụ na Santa Claus (St. Nicholas) bụ onye Uganda, ọ ga-abụ na a ga-eme oge ahụ baptizim “Kristi na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.”
Na-arịwanye elu, azụmahịa a aghọwo nnukwu ụlọ ọrụ nke ọtụtụ ndị ọchụnta ego si Uganda na-eji ọkụ na-egbuke egbuke na anwụrụ ọkụ na-esi na ahịhịa na-ere ọkụ na-eme ka ndị a na-eme ihe n'ehihie na-akụrisị n'ime mpempe ígwè ma na-abanye n'ime gbọmgbọm ka a ga-ejide ma na-egbute ya n'ìgwè. Obodo nta ndị a na-enwu nke ọma nke na n'otu oge mgbe onye edemede a na-eme njem n'abalị si Kigali gaa Kampala, onye edemede a mehiere rụtụrụ aka na ọkụ dị ka obodo Masaka, naanị na ọ ghọtara na ọ bụ ìgwè ụkpara na-adọrọ mmasị n'ìhè ahụ, nke na-ewute ya nke ukwuu. ndị ọzọ bi.
Otu akpa nke ahịhịa ahihia nwere ike ị nweta ihe ruru UGX 280000 (US$80) na ọnụ ahịa ọnụ ahịa na Kampala ebe ọ na-achọsi ike n'aka ndị na-ere ahịa n'okporo ámá na-ere ya ndị njem na-aga ahịa ahịa obodo. Ọtụtụ obodo ndị sitere na Masaka jisiri ike bulite ihe ha ji ebi ndụ, rụọ ụlọ, na ọbụna kụziere ụmụ ha ka ha si azụ ahịa.
Ihe ọzọ bụ na dị ka nyocha sitere n'aka Òtù Na-ahụ Maka Nri na Ọrụ Ugbo (FAO), ụmụ ahụhụ ndị a na-eri eri na-eme ka ndụ ha dịkwuo mma, na-enye aka na nchekwa nri na ihe oriri na-edozi ahụ, ma nwee akara ala nke gburugburu ebe obibi dị ala ma e jiri ya tụnyere isi mmalite ndị ọzọ nke protein sitere na anụ ehi, anụ ezi, ọkụkọ, na atụrụ.
N'agbanyeghị ihe akaebe nke uru nri ha bara dị ka isi mmalite nri ọzọ nke na-edozi ahụ na gburugburu ebe obibi, mba ndị dị ka USA, EU steeti, na UK emezigharịghị mmachi iji kwe ka ebubata ụmụ ahụhụ ọbụna mgbe a na-achịkọta ha maka mbupụ. Ọtụtụ ndị njem n'Africa enwetala njikwa oke oke na-emebi nri a dị oke egwu mgbe ha rutere ebe ha na-aga na-ewe iwe. N'otu oge, otu onye njem si Uganda (a na-akpọchi aha) ahọpụtara ka ọ tụfuo ahịhịa ahịhịa dị oke ọnụ n'ọnụ kama inyefe ha n'aka ndị ọrụ kọstọm US tụrụ n'anya, ọ bụghị mgbe ha gachara ọkara gafee ụwa.
E nwekwara ihe àmà na-egosi na ụmụ ahụhụ na-ebupụ obere ikuku griin haus na amonia karịa anụ ụlọ nke na-akpata 14.5% nke ikuku ikuku griin ha, ebe methane sitere na anụ ụlọ bụ nnukwu nsogbu na-akpata pasent 16, dị ka Òtù Na-ahụ Maka nri na Ọrụ Ugbo nke Mba Ndị Dị n'Otu (FAO) si kwuo. ).
Ụmụ ahụhụ na-achọ akụkụ dị nta nke ala, ígwè ọrụ ugbo dị ka traktọ, pesticides ma ọ bụ nfuli ogbugba mmiri, na-eto n'ime ụbọchị karịa ọnwa ma ọ bụ afọ. Ha na-eri obere ume ma e jiri ya tụnyere ụdị ọrụ ugbo ndị ọzọ nke bụ nnukwu ihe na-akpata mfu ihe dị iche iche dị ndụ n'ụwa yana nnukwu ihe na-enye aka na ikuku ikuku griin haus. N'ihe ruru 1 mmadụ na ụmụ ahụhụ ijeri 1.4, nke a dị oke egwu ma nwee ike bụrụ ihe enyemaka maka nri nri ụwa ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ejiri ntụ ntụ ma ọ bụ ụdị dị ụtọ karịa iji zọpụta ndụ.
na COP26 ebe Greta Thunberg sonyeere ndị ntorobịa na-akwado ihu igwe, onye Uganda Vanessa Nakate kwuru na nzuko a dara ada na-ekwu na ọ bụ "ememme mgbago ugwu ugwu ụwa niile."
Ọ nọghị anya n'eziokwu ebe G20 anaghị eje ije n'okwu ahụ n'agbanyeghị na ọ na-enye 80% nke ikuku CO2. Ọ bụrụhaala na ụmụ ahụhụ anọghị na nchịkọta oriri oriri na ọṅụṅụ na-esote (dị ka a chọrọ ma ọ bụ maka ụfọdụ ihe mgbochi mgbochi) ịgbakwunye na escargot, sushi, na caviar - maara nke ọma na palette ọdịda anyanwụ, ọ ka bụ ọdịda. Nakate gbakwụnyere, "N'akụkọ ihe mere eme, Africa na-akpata naanị 3% nke ikuku ikuku zuru ụwa ọnụ ma ndị Africa na-ata ahụhụ ụfọdụ n'ime mmetụta obi ọjọọ nke nsogbu ihu igwe kpatara." Otú ọ dị, ọ na-enye okwu olileanya, na-atụ aro na mgbanwe nwere ike ime ma ọ bụrụ na ndị na-eme ihe ike nọgidere na-ejide ndị isi maka imerụ ihu igwe.
N'ụzọ dị mwute, laa azụ n'ụlọ na Nakate's Uganda, enweela mbelata nke mkpụrụ sitere na owuwe ihe ubi ka ọ dabara na mmetụta ọjọọ nke mgbanwe ihu igwe n'ihi igbutu osisi. Na Bukatata, nnukwu ebe nke ruru hectare 9,000 nke ebe obibi ọhịa nke bụbu oke ọhịa na ala ahịhịa bụzi ahịhịa painiapulu.
Na Kampala ebe ahihia na-ada ruo mgbe 90s, oghere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na swathes nke ọhịa enyela ụzọ wuo nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ elu, ụlọ obibi, na okporo ụzọ.
Ikekwe n'echiche azụ azụ, onye nnọchianya na-amaghị ama maka ụkpa na ndị na-akwado mgbanwe ihu igwe maka okwu ahụ, bụ Lupita Nyong'o, onye mmeri ụlọ akwụkwọ mmuta nke onye na-eme ihe nkiri na-akwado kacha mma n'afọ 2014, mgbe ọ tụgharịrị uwe ya na mmeghe nke Cannes ihe nkiri na "nsenene Uganda. ,” maka agba ya na ụdị nku ya na ịkele ụmụ nwanyị Uganda maka mkpali edozi isi.
Ruo mgbe ahụ, ndị ọchụnta ego nke Uganda ga-anọkwa n'amaghị ama ka oghere ha na Masaka ruo mgbe onye sitere na G20 nwetara ndetu ahụ.